नोभेम्बर 19, 2016 नोभेम्बर 19, 2016 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment बुल्गेरिया, रोजीरोजी दुलही किन्न पाइने देश
एजेन्सी, ४ मंसीर । रोजीरोजी दुलही किन्न पाइने देश बुल्गेरिया ! आजको २१ औ शताव्दीमा यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो कुरा सत्य हो । दुलही किनबेच हुने बजार लाग्दै आएको बुल्गेरियाको स्टारा जागोर नामक शहरमा हरेक ३ वर्षमा यस्तो बजार लाग्ने गर्दछ । यो प्रचलन एउटा सस्कारको रुपमा स्थापित भएको छ ।
जुन अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । यो बजारमा बुल्गेरियाको आदिबासी कलाइदझी समुदायका युवायुवतीहरुमात्र सहभागी हुन्छन् । उक्त समुदाय बाहेक अरुले दुलही किन्न पाउँदैनन् । सो बजारमा गएर विवाह गर्न योग्य पुरुषले आफ्ना लागि दुलही छान्न सक्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित परिवारले तोकेको मुल्य तिरेपछि आफुले रोजेकी दुलही पाउँछन् । विवाह गर्न सजिलो होस भनेर यस्तो मेलाको आयोजना गरिएको हो ।
उक्त बजारमा उपलब्ध दुलहीहरु सजिसजाउ भएर पुग्छन् भने दुलही किन्ने दुलाहले सम्भव भएसम्म आफु समानको अन्यथा आफू भन्दा २ देखि ५ वर्षसम्म कम उमेरकी दुलही मात्र किन्न सक्छन् । दुलही किन्ने यो मेलामा दुलाहा दुलही दुवैको परिवार उपस्थित हुनुपर्दछ । दुवैले एक अर्कालाई मन पराउने पर्ने सर्त हुन्छ । त्यसपछि दुलही छानिन्छ, छानिएकी दुलहीको मूल्य तोकिन्छ र उनीहरुको विवाहको तिथि तय गरिन्छ ।
स्रोत : डेलीमेलको सहयोगमा
← नेपालका रमन म्याग्सेसे पुरस्कार बिजेताहरु
तपाईंलाई सवैभन्दा सुन्दरी मिस नेपाल को लाग्छ ? →
One thought on “रोजीरोजी दुलही किन्न पाइने देश बुल्गेरिया”
Pingback:कस्तो अचम्म ! यी देशमा महिनावारीका बेला महिलालाई विदा दिइन्छ